အလှအပဆိုင်ရာပစ္စည်းများ - Bezzia | Bezzia
ဆက်ကပ်အပ်နှံအပိုင်း အလှအပထုတ်ကုန် အမျိုးသမီးများသည်လှပသောအသွင်အပြင်ဖြင့်မျက်နှာအသွင်အပြင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ဆံပင်အလှအပသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုခေတ်မီစေရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သောအမြိုးမြိုး၏။ ဤအရာများသည်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိစေရန်ကူညီပေးလိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်နှင့်ရှုမြင်ရန်ကိရိယာများဖြစ်သည်။
ဆိုးဆေးများ- နှစ်များတစ်လျှောက်အရောင်ဆိုးဆေးများသည်အရည်အသွေးနှင့်အမျိုးမျိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီးဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ အလှကုန်စင်တာများသို့မဟုတ်အလှကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်ဆိုးဆေးအရေအတွက်၊ အမြဲတမ်းဆိုးဆေးများ၊ အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအခြားသူများအတွက်အထူးအရောင်းဆိုင်များတွင်ယနေ့တွေ့ရှိခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ၊ အညစ်အကြေးများဖြင့်အရောင်ရေချိုးခြင်းကိုသင်နှစ်သက်သောဆိုးဆေးဖြင့်ဆံပင်ကိုဂရုစိုက်။ အာဟာရနှင့်တောက်ပစေနိုင်သည်။ ဤတွင်သင်သည်ဖက်ရှင်အများဆုံးကုမ္ပဏီများပေါ် မူတည်၍ ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဆိုးဆေးများကိုတွေ့မြင်ရမည်။
မျက်နှာဖုံးများ: အလှကုန်ပစ္စည်းလောကသည်လှပသောကမ္ဘာကိုအပ်နှံထားသောအထင်ကြီးဖွယ်ရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သို့မှသာယနေ့အမျိုးသမီးသည်ဘဝ၏အနှစ်သာရအရှိဆုံးပျော်ရွှင်မှုများကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မျက်နှာဖုံးများ၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်မည်သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်မဆိုအသားအရေကိုကြီးစွာရရှိလိမ့်မည်။ အတုသို့မဟုတ်သဘာဝမျက်နှာဖုံးများ၊ သင်မှန်တယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်သင့်၏မျက်နှာဖုံးများ၊ သခွားသီး၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ထောပတ်သီး၊ အုန်းသီးစသည့်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်၊ မည်သို့အသုံးချရမည်နှင့်တစ်နေ့တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်များကိုသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ကျန်းမာသော၊ ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အညစ်အကြေးကင်းသောအရေပြားရှိသည့်မျက်နှာဖုံးများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
Cremasဖြေ - လိုအပ်ချက်များစွာအတွက်လိမ်းဆေးတွေရှိတယ်။ မိတ်ကပ်လောကတွင်မိတ်ကပ်မချခင်၊ အတွင်းနှင့်ပြီးနောက်အရေပြားကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မိတ်ကပ်လိမ်းရန်အတွက်လိမ်းဆေးအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသားအရေတစ်မျိုးတည်းသာရှိပြီးပျက်စီးပါက၎င်းသည်နောက်တဖန်မည်သည့်အခါမျှမရှိတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင်သင်၏အသားအရေနှင့်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များကိုရွေးချယ်ရန်အကြံဥာဏ်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ စျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိနေသောဤထုတ်ကုန်များနှင့်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောအိမ်လုပ်အများဆုံးရွေးချယ်စရာများအပြင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်၊ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုထက်အသုံးဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ရံဖန်ရံခါအိမ်လုပ်စာရွက်သည်ဤနေရာ၌ရှိသည်။
အလှကုန်အလှကုန်ဆိုသည်မှာအလွန်ယေဘူယျစကားလုံးဖြစ်သည်။ မိတ်ကပ်မချခင်၊ အတွင်းနှင့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားကိုဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဒီတော့ဒီမှာသံသယမရှိဘဲသင်အကြံဥာဏ်များမှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအထိ၊ သင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မစဉ်းစားမိသောလှည့်ကွက်များအထိသင်လိုအပ်သမျှကိုရှာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေကိုအလှကုန်အချို့ဖြင့်ဂရုစိုက်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမိတ်ကပ်နှင့်အခြားအသုံးအဆောင်များဖြင့်မအပြစ်ပေးပါ။ အသားအရေတစ်မျိုးစီသည်အလှကုန်တစ်မျိုးနှင့်မိတ်ကပ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးလိုအပ်ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေးစားရန်သတိပြုရမည်။
ဆံပင်ကုသမှု: ဤနေရာ၌ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်ထုတ်ကုန်များလိုအပ်သည်၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်အလှအပစင်တာများတွင်ကျယ်ပြန့်သောဆံပင်များ၌တွေ့နိုင်သောဆံပင်ကုသနည်းများသည်သင်၏ဆံပင်ကိုအမြဲဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်ဆေးကုသမှုများသည်ခံနိုင်ရည်အားကောင်းစေပြီးအသံအတိုးအကျယ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းအန္တရာယ်မရှိဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့လိုချင်တာကမင်းကိုပြောဖို့ပါ အလှကုန် ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောအလှအပဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်အမျိုးမျိုးအတွက်လိုအပ်သည် - smoky ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးခဲတံ၊ နှစ်၏အရောင်များနှင့်အညီအကောင်းဆုံးနှုတ်ခမ်းနီသို့မဟုတ်အဆီပြန်အသားအရေအတွက်အကောင်းဆုံးမုန့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်လည်းသင်ဤအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုပြသရန်, စျေးနှုန်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားနေသည်ဤထုတ်ကုန်ပြသချင်တယ်, အခြားမည်သည့်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူသင်အကောင်းဆုံး option ကိုရှာတွေ့မှ။
por စူစန်နာ Garcia က လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ခမ်းနီကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုလိုပါကရေဓာတ်ပြည့်ဝသောနှုတ်ခမ်းရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဟာက ...
ဒီနွေရာသီအတွက် Kiko Milano မှ Dolce Diva စုဆောင်းခြင်း
Kiko Milano သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်မှုရရန်စုံလင်သော collection အသစ်များကိုအမြဲပြသသည်။
နွေရာသီညှိ -Up များအတွက်အလှကုန်
နွေရာသီအလှည့်ကျရောက်နေပြီ၊ ငါတို့ပျော်မွေ့ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ဒါ…
hyaluronic acid ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်မည်သို့အသုံးပြုသည်
Hyaluronic acid ဟာအထူးသဖြင့်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားခဲ့ရဖူးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။
အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများကိုပိုမို အသုံးပြု၍ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သင်၏အလှအပအစီအစဉ်များတွင် macadamia oil ကိုသုံးပါ
Macadamia သည်Australiaစတြေးလျမှအစပြုပြီးအပင်တစ်ပင်ပေါ်တွင်ပေါက်သောအသီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီသစ်ပင်ကြီးက
Inditex သည် Zara ၏အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ် Zara Beauty ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည်
por စူစန်နာ Garcia က လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
Zara မှာအလှကုန်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ခုရှိပြီးသား ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအထက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။
နွေ ဦး ရာသီ၌သင်၏အသားအရေကိုပြသရန်အိမ်လုပ်မျက်နှာဖုံးများ
Kiko Milano သည်အစိမ်းရောင်အလှကုန်များနှင့် Green Me နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
Kiko Milano ကုမ္ပဏီသည်တန်ဖိုးနည်းသည့်အလှကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်စုဆောင်းမှုအသစ်များကိုအမြဲတမ်းယူဆောင်လာသည်။
L'Oreal Professionnel X-Tense ဖြောင့်ခြင်း၊ လျှောက်ထားရန်
အမှိုက်ဆံပင်များအတွက် Moroccan ဖြောင့်
သင်၏ဆံပင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲဖြောင့်သောသံကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုချက်များ ၁၀ ခု
အရေပြားအညစ်အကြေးများအတွက် hydroquinone လိမ်းဆေးသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို